သင်တို့ လက်ဖ၀ါးပေါ်က ဇကာကွက် လေးများမှ ပြောသော သင့်အကြောင်း...!
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-CQMf9c9JINM/Wtm6unAoyxI/AAAAAAABlVI/ZnJ0bp2S6kMLOyELnXEcN5-0zy2HfW5yACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/pexels-photo-594421.jpg" alt="ထားခဲ့ချင်ပြီလား …? ထားခဲ့လေ ! တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ နင်ထားခဲ့လို့ ပြန်လာပါလို့ ခယတောင်းပန်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး">
ထားခဲ့ချင်ပြီလား …? ထားခဲ့လေ ! တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ နင်ထားခဲ့လို့ ပြန်လာပါလို့ ခယတောင်းပန်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး
Phothutaw လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ်ခန့်က
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-vrm_JXskdXY/Wtm5uHy0PqI/AAAAAAABlU0/VM5INlq9BMgoifa730ZQKzzCd7M7K-YPACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/Buddha-Under-Bodhi-Tree.jpg" alt="စရဏ (၁၅)ပါး ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ ?">
စရဏ (၁၅)ပါး ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ ?
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-KkMd1nZCDtE/WtnAkiv4e7I/AAAAAAABlWU/SczL-OjfYuAbpw3v5hONb8W8D-TLSgRHwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/atraktive.jpg" alt="မိန်းကလေးတွေသတိမထားမိကြတဲ့ ယောက်ျားလေးအများစုရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအမူအကျင့်တွေ">
မိန်းကလေးတွေသတိမထားမိကြတဲ့ ယောက်ျားလေးအများစုရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအမူအကျင့်တွေ